एप्पल एप्पल वाच | सात नयाँ घोषणा प्रकाशित आईफोन समाचार
एप्पलले सात नयाँ एप्पल वाच घोषणा प्रकाशित गर्दछ
एप्पल प्रकाशित भएको छ सात नयाँ एप्पल वाच घोषणाहरू। यी सात विज्ञापनहरूमा हामी यस्तो अवस्था देख्न सक्दछौं जुनमा स्याउ घडीले हामीलाई मद्दत गर्न सक्दछ वा हामीलाई बढी आरामदायक बनाउँदछ। सात विज्ञापनहरू मात्रका लागि हो 15 सेकेन्ड, हाम्रो कलाई बाट केहि कार्यहरू प्रदर्शन गर्न हामी कती सहज र सरल देखाउनको लागि पर्याप्त समय भन्दा बढि। प्रायः विज्ञापनको अवधि पनि गतिको भावना दिनको लागि डिजाइन गरिएको हो। तपाईंसँग तल सबै घोषणाहरू छन्।
पहिलो विज्ञापनमा हामी एक व्यक्तिले सिरीलाई सोध्यो संगीत बजाइरहेको देख्न सक्छौं। सम्भवतः, तपाईंसँग तपाईंको आईफोन नजिक छ र स्टेरियोमा जडान गरिएको छ, किनकि यस प्रकारको सानो उपकरणले बजाएको संगीतमा नाच्न ...
यसमा हामी एक जोडीलाई चुम्बन गर्न देख्न सक्छौं, जुन बिन्दुमा केटीले सन्देश प्राप्त गर्दछ, यसलाई हेरी, महसुस गर्छ कि यो महत्त्वपूर्ण छैन र आफ्नो केटालाई भेट्न फर्कन्छ। मलाई लाग्दैन कि यी अवस्थाहरूमा यो अवस्था सबैभन्दा सामान्य हो, तर त्यहाँ धेरै परिस्थितिहरू छन् जसमा कल वा सन्देश महत्त्वपूर्ण छ वा छैन लायक छ भनेर थाहा पाउँदा।
एप्पल वाचको एक महान निर्णय भनेको विभिन्न पट्टिहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना थियो। यो त्यस्तो चीज हो जुन यस विज्ञापनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जहाँ एउटी केटीले आफ्ना विभिन्न पट्टिहरू आफ्ना विभिन्न लुगाहरूसँग जोडिदिन्छ।
समय भनेको सबै कुरा हो। यस्तो अवस्थामा, पियानोवादक सृजनाको समयमा हुन्छ जब उसले इबेबाट सूचना प्राप्त गर्दछ, आफ्नो बोलपत्र बढाउँदछ, र खेल्न जारी रहन्छ।
केही केटीहरू स्केटिंग गर्दैछन् र उनीहरू आइसक्रिम चाहान्छन्। तपाईले के गर्नु पर्छ? वालेट निकाल्ने हो? ठीक छ, उत्तम कुरा भनेको एप्पल वाच र एप्पल पेको साथ भुक्तानी गर्नु हो।
अघिल्लो अवस्था जस्तै, तर अधिक महत्त्वपूर्ण। एउटा विमानस्थलमा र यति धेरै सामानहरू तान्दै, उत्तम कुरा भनेको हामीसँग हाम्रो पॉकेटमा रहेको स्मार्टफोनको परामर्श लिनु होइन, तर एप्पल वाचलाई हेर्नु हो।
र अन्तिम विज्ञापनमा हामी केटीले खेल खेलिरहेको देख्न सक्दछौं, एउटा प्रयोगमा के हो जुन हामी खेल कंगनको बारेमा बढी जान्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पलले सात नयाँ एप्पल वाच घोषणा प्रकाशित गर्दछ
साउरिकले सिडिया इन्स्टलरलाई अपडेट गर्दछ। साइडिया इम्पेक्टर तल आउँदैछ
मिसफिट शाइन २ प्रस्तुत गर्दछ, एक धेरै राम्रो खेलको कंगन